Iimeko Jikelele Sebenzisa - Rikoooo
Iimeko Jikelele Ukusetyenziswa Rikoooo.com
Yokugqibela kancincane kwi 16 / 01 / 2017
Ezi Imigaqo yokuSebenzisa ukuchaza iimeko apho Website Rikoooo.com inika ufikelelo kwiinkonzo zayo. Ngokuthi ubhalise Rikoooo.com, nawe uqinisekise ukwamkela yonke imigqaliselo ezi jikelele yokuSebenzisa. Ukuba awuvumi nale imiselo neMiqathango, ukuze ukusebenzisa iinkonzo zethu.
Le nkonzo ikwazisa nanini ifayile entsha iyafumaneka ukukwethulwa kwaye ulwazi olubalulekileyo. Idilesi yakho ye email ayosuleli naliphi na iqela lesithathu kwaye ihlala ziyimfihlelo. Uyakwazi nangaliphi na ixesha aguqule kancinane kwaye urhoxisele umrhumo wakho wakho indawo ilungu okanye ezantsi email nganye efunyenweyo.
Ukusebenzisa amalungu enu Area
Ukufikelela kwindawo ilungu yakho, kufuneka njengomqwalaseli kunye lokugqitha ukuba uzimisele ngokwakho xa wangena kuqala. Kwimeko ilahleko ezi lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo, ungenza ngokukhawuleza kubafumana kwisiza Rikoooo.com ngokunqakraza ikhonkco leyo kwindawo yokuchonga:
Ingaba uyilibele iphasiwedi yakho ?
Uya kwandula kuthunyelwa i-imeyile equlethe password yakho.
Ngokungqinelana nomthetho "Informatique et Liberte" ye 6 January 1978, unalo ilungelo lokufikelela, ukulungisa, ukulungisa kunye ucime iinkcukacha ngawe.
Ukuze usebenzise eli lungelo izisombululo ezithathu ziyafumaneka kuwe.
- Ngena kwi "ilungu Area"Kwaye wenze naluphi na utshintsho intanethi.
- Qhagamshelana Webmaster
- Thumela ileta kucetyiswa ukuba Rikoooo.com 107 Chemin Gaillard du kwizibuko 31410 noNoé - France
Rikoooo.com uthembisa ukusebenzisa bonke kuthetha kuyimfuneko ukuqinisekisa ukubonelelwa ngeyona kweenkonzo nto inika kumsebenzisi Internet. Oko kuba nabutyala kwimeko nje kancinci okanye de facto ngaphaya kwalo, ingakumbi xa kuthe yophazamiseko inkonzo ngenxa kukuphanza kwenethiwekhi yefowuni okanye umboneleli yofikelelo intanethi lomsebenzisi Internet okanye ukuhlaziywa yeekhomponenti site okanye web umncedisi.
Rikoooo.com ayinaxanduva ngenxa yokusetyenziswa ezinokuthi zenziwe umsebenzisi ulwazi kunye neenkonzo ezikhoyo kwisiza.